ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၃၀-၅-၂၀၁၃ - နံနက်ပိုင်း)
မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၃၀-၅-၂၀၁၃ - နံနက်ပိုင်း)
- လက်ပံတောင်း အကြမ်းဖက် ဖြိုခွင်းမှု ၆ လပြည့် ဆန္ဒပြ click
- အစာငတ်ခံ ဆန္ဒပြသူ အလုပ်သမားနှစ်ဦး ဆေးရုံတင်ရ click
- KIO နဲ့ အစိုးရအကြား စစ်ရေးကိစ္စ ဆွေးနွေး click
- ကချင်ငြိမ်းချမ်းရေး ဒုတိယနေ့ တံခါးပိတ် ဆွေးနွေး click
- အစိုးရနဲ့ ကေအိုင်အို စစ်ခေါင်းဆောင်များ သီးခြားတွေ့ဆုံဆွေးနွေး click
- သားသမီးဦးရေ ကန့်သတ်မှု အမေရိကန် စိုးရိမ် click
- ကလေးဦးရေ ကန့်သတ်မှု ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရ ရှင်းလင်းချက် click
- သားသမီး ကန့်သတ်မှု ဒေသန္တရအမိန့် မြန်မာအစိုးရ ပြန်သုံးသပ်မည် click
- လားရှိုး ပဋိပက္ခ လူ ၁ ဦး သေ၊ ၄ ဦး ဒဏ်ရာရ click
- လားရှိုးမြို့မှာ မီးရှို့မှုတွေ ဆက်လက်ဖြစ်ပွား click
- လားရှိုးမြို့ အဓိကရုဏ်းကြောင့် အဆောက်အဦးနဲ့ ဆိုင်ခန်းတွေ မီးလောင် click
- လားရှိုးမြို့ ဆူပူမှု အာဏာပိုင်တွေ ဖမ်းဆီးအရေးယူ click
- လားရှိုးမှာ လုံခြုံရေးချထား click
- လားရှိုး ပဋိပက္ခ (ဓာတ်ပုံများ) click
- PR စနစ်ကို လက်မခံနိုင်ကြောင်း RNDP ဆုံးဖြတ် click
- အမေရိကန်ခရီး ဖို့ဝိန်းမြို့၊ လမ်းခုလတ်မှာ ၈၈ မျိုးဆက်ခေါင်းဆောင် ကိုကိုကြီးနဲ့ မေးခွန်းတိုထွာ click
- ကရင်အမျိုးသား နှီးနှောဖလှယ်ပွဲ ကျင်းပ click
- ဒီပဲယင်းက ညွှန်ပြခဲ့တဲ့လမ်း (ဆောင်းပါး) click
- စက်မှုဇုန် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ရရှိရေး (ရုပ်သံ) click
- မိုးမျှော်တဲ့ ရိုးရာလွန်ဆွဲပွဲ (ရုပ်သံ) click
- ပညာရေးစနစ်ပြုပြင်ရေး ဆွေးနွေးပွဲများ စစ်တွေနဲ့ ကော့သောင်းမှာ ကျင်းပ click
- ပျဉ်းမနားက ဝါးပန်းပုပညာရှင် (ရုပ်သံ) click
- ဆိုင်မွန် အွန်လိုင်း စာကြည့်ဆိုဒ် click
- မိဘမဲ့ တိုင်းရင်းသားလူငယ်များအတွက် ဂီတပညာရှင်များနဲ့ သြစတြေးလျ မြန်မာမိသားစုများရဲ့ ဒါန click
- ဗဲင်းဆင့်ဗဲန်ဂိုးလ်နှင့် မကြားတကြား ..အင်တာဗျူးခြင်း (ကဗျာ) click
- သိက္ခာဆိုတဲ့ တရား လူသိများလာတဲ့ တနေ့ (ကဗျာ) click
- ၂ဝဝ၃ ဒီပဲယင်းဒဏ်ရာ (ကဗျာ) click
- ဥာဏ်ကြီးရှင် (ကာတွန်း) click
- ပြင်ဖို့ကတော့ ရယ်ဒီပဲ … (ကာတွန်း) click
- ဘာမှန်းမသိ … ညာမှန်းမသိ (ကာတွန်း) click
- ဘော့စ်နီးယား-ခရိုအက်ခေါင်းဆောင် ၆ ဦးကို ပြစ်ဒဏ်ချမှတ် click
- အမေရိကန် အဝေးထိန်းဒုံး တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် တာလီဘန်တပ်မှူး သေဆုံး click
- သူပုန်အဖြစ် မင်္သကာသူတွေကို ဖမ်းတာ အငြင်းပွားနေ click
- ဟစ်ဇ်ဘိုလာကို ဆီးရီးယားသူပုန် မခုခံနိုင် click
- လက်နက် အမြန်ထောက်ပံ့ဖို့ EU ကို ဆီးရီးယားအတိုက်အခံ တောင်းဆို click
- နေတိုးမဟာမိတ် ဆိုက်ဘာ လုံခြုံမှု (ရုပ်သံ) click
- အမေရိကန် ကာကွယ်ရေးစနစ်နဲ့ တရုတ် Cyber ထိုးနှက်မှု (ရုပ်သံ) click
- ဗြိတိသျှ စစ်သားသတ်မှု စတင် စွဲဆို click
- ဧ၀ရက်တောင်ထိပ်ကို တက်ရောက်အောင်မြင်ခြင်း နှစ် ၆၀ ပြည့် click
- ဧဝရက်တောင်ကို ပထမဆုံး လူသားတွေ တက်ရောက်တာ နှစ် ၆၀ ပြည့် click
- လူသတ်စက်ရုပ် ဆန့်ကျင်မှုများ (ရုပ်သံ) click
ဂျာနယ် အမှတ်- ၁၄၂ မှာ ဘက်ထရီတပ် စက်ဘီးများ
ပြည်သူများ စီးနင်းခွင်. မရှိတာ သိသင်.ကြောင်း ၊ စီးရင်အရေးယူခံရမှာဖြစ်ကြောင်းရေးထား
... ကျွန်တော် တရုတ်ပြည်နဲ. အရှေ.တောင်အာရှ ၄ နိုင်ငံ
ရောက်ဖူး ပါတယ် ၊
... ဘက်ထရီတပ် စက်ဘီး မပြောနဲ. ဆိုင်ကယ်မစီးရ
ဆိုတဲ.မြို.တောင် လုံးဝ မရှိ ပါဘူး ၊ ဒါဟာ အစိုးရရဲ. လူ.အခွင်.အရေး ချိုးဖေါက်မှုပါ ။
.. တလောက အင်ဒိုနီးရှားမှာ ဆိုင်ကယ် ဓါတ်ဆီခွဲတမ်း
လျှော.လို. လမ်းတွေပိတ် ၊ မီးတွေရှို. ဖြစ်ကြတယ် ။
ရန်ကုန်လို ဆိုင်ကယ်မစီးရ ဥပဒေ ကို ဘန်ကောက် ၊ ဂျကာတာ၊
ဟိုချီမင်းစီတီး ၊ ဖနွမ်းပင် ၊ကွာလာလမ်ပူ စတဲ.မြို.တွေမှာ
ထုတ်ကြည်.ပါလား ၊ ရပါ.မလား ။
... မြန်မာပြည်မှာ ... ပြည်သူတွေ လူ.အခွင်.အရေး
ချိုးဖေါက်ခံရမှန်းမသိ ခံနေရတာ ... သိစေချင်တာပါ ။
နိုင်ငံ အတော်များများမှာ ပြည်သူတွေ သွားလာရေး ၊ကျန်းမာရေးအတွက် စက်ဘီးစီးဖို. 1.5 m မျဉ်း ကို လမ်းဘေးမှာထားပေး တယ်။
...ဒီမှာက လမ်းဆိုတာ ကားအတွက် ဘဲလိုဖြစ်နေတယ် ။